ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर 8 लाउन्ज समीक्षा | ग्याजेट समाचार
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर 8 लाउन्ज समीक्षा गर्नुहोस्
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | सामान्य, समीक्षा
हामी हाम्रो वेबसाइट मा धेरै गतिविधि संग जारी राख्छौं र हामी परीक्षण उत्पादनहरु प्राप्त गर्न रोक्दैनौं। फेरी एकचोटी Energy Sistem को हातले हामी सम्बन्धित भाग्यशाली उपकरणहरू मध्ये कुनै एकको परीक्षणको लागि भाग्यशाली छौं यस पलको सबैभन्दा बहुमुखी र शक्तिशाली आवाज, ऊर्जा प्रणाली होम स्पिकर L लाउन्ज.
जब हामी ऊर्जा सिस्टेमको बारेमा कुरा गर्छौं हामी सँधै संगीत, ध्वनी र सम्बन्धित उपकरणहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। आज यो सबै उच्च अंक को एक मा पुग्न धन्यवाद एक उत्पादन लायक उल्लेखनीय छ यदि तपाईं तपाईंको घरलाई सब भन्दा राम्रो आवाजसँग सुसज्जित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो पोर्टेबल स्पिकर होईन, यद्यपि तपाईं यसलाई लिन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं चाहनुहुन्छ।
1 ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L घरका लागि लाउज आदर्श
2 उर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्जको डिजाइन
3 प्राविधिक विशिष्टता तालिका
4 फाइदा र बेफाइदा
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L घरका लागि लाउज आदर्श
हामी धेरै उत्पादनहरू परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं एनर्जी सिस्टेममा हाम्रा साथीहरूबाट। तिनीहरूसँग वास्तवमै हेडफोनहरू वा स्पिकरहरू जस्तै उत्पादनहरूको विशाल सूची उपलब्ध छ। तिनीहरू मध्ये हामी केहि प्रयास गर्न मन पराउँथ्यौं ध्वनि टावरहरूगृह स्पीकरको लाइनमा अलि अलि। उत्पादनहरू सँधै एकको साथ गुणस्तर र मूल्य बीचको सम्बन्ध जुन बाहिर खडा हुन्छ प्रतिस्पर्धाको बारेमा।
ऊर्जा प्रणाली होम स्पिकर L लाउन्ज एकदम विशेष उत्पादन हो। र यो किनभने छ बहुमुखी प्रतिभा एकल उपकरणमा प्रस्ताव गरियो। र पनि विशाल शक्ति त्यो प्रस्ताव गर्न सक्षम छ। हामी सानो स्पीकरको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनौं, तर हामीले आवाज सुन्दा यो कुनै फरक पार्दैन। घरको कुनै पनि कोठामा अधिकतम गुणस्तर, र बाहिर पनि.
यदि तपाइँ एक उपकरण खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँ तपाइँको घर मा कहिँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रस्ताव एक उचित मूल्य मा शक्ति र ध्वनी गुणवत्ता। र त्यो पनि कुनै वातावरण वा सजावट संग टकटकी छैन, होम स्पीकर L लाउन्ज तपाईलाई चाहिने भन्दा धेरै नजिक हुन सक्छ। तपाईं यसलाई समात्न सक्नुहुन्छ ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्ज अमेजनमा छुट र नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
उर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्जको डिजाइन
यो याद गर्न को लागी समय छ यो कसरी शारीरिक छ होम स्पिकर L लाउन्ज र तपाईको उपस्थितिको बारेमा सबै कुरा बताउनुहुन्छ। यद्यपि ऊर्जा सिस्टेम जहिले पनि डिजाइनको अग्रभागमा रहन्छ र धेरै रंगीन र साहसी उपकरणहरू प्रदर्शन गर्दछ, यो मामला त्यस्तो छैन। हामी पहिले छौं एक उपकरणको साथ डिजाइन जुन हामी क्लासिकको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं। यो छ आयताकार आकार उत्कृष्ट फिनिश र राम्रो निर्माण सामग्रीका साथ यसले गुणस्तर छवि दिन्छ।
उहाँको Frontal हामी "ग्रिल" फेला पार्दछौं जसले स्पिकरहरू ढाक्छ। एउटा विवरण जुन हामीले अन्य फर्महरूमा फेला पार्न सक्दैनौं भनेको यो हो कि हामी यसलाई कालोमा छनौट गर्न सक्दछौं, अन्य उपकरण जस्तै। तर रातो र colorमा पनि यसले घरको जहाँसुकै बाहिर खडा बनाउँदछ। र दुबै बक्समा समावेश छन्। जबकि हामी केवल आवरणमा मात्र देख्न सक्छौं यसको पछाडि तिनीहरू लुक्छन् अप5फ्रन्ट ड्राइभरहरू जसले अविश्वसनीय 60W पावर उत्पादन गर्दछ.
मा माथि हामीले आठजना भेट्यौं टच कन्ट्रोल बटनहरू। धेरै सहज टच नियन्त्रणहरू। हामीसँग बटन छ खुला बन्द, एक बटन menu जसमा हामी अडियो इनपुट चयन गर्न सक्दछौं। यसको छेउमा, बाँयाबाट दायाँ हामीसँग चयन गर्न अर्को बटन छ, प्ले गर्न सकिने संगीतको प्रकारमा निर्भर गर्दै समानता ढाँचा उपयुक्त
बाँकी बटनहरू हुन् प्ले / पज गर्नुहोस् संगीत प्लेब्याक को लागी। अगाडि वा पछाडि ट्र्याक गर्नुहोस् र नियन्त्रण भोल्युम। का लागि बटन नियन्त्रण गर्दछ जुन हामी हाम्रो स्मार्टफोनको साथ पनि गर्न सक्दछौं यदि यो चयनित अडियो स्रोत हो भने। तर हामी पूर्ण रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्दछौं रिमोट कन्ट्रोल। सबै कम्फर्ट हुन् ताकि हामी गीतलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने हाम्रो मनपर्ने कुर्सीबाट उठ्नुपर्दैन।
किन्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्ज उत्तम मूल्यमा अमेजनमा
मा पछाडि ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर L लाउन्जमा हामी विशाल भेट्टाउँदछौं सम्भावना को विविधता। जडान गर्न ब्लुटुथ 4.1.१ मार्फत उपकरण जडानको सम्भावना Mm.mm मीमी ज्याक एनालग पोर्ट, वा मार्फत अर्को उपकरणमा जडान गर्दै optical / coaxial डिजिटल इनपुटहरू। तर यहाँ विकल्पहरू अन्त्य हुँदैनन्, हामी पनि प्रयोग गरेर उपकरण पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं USB र एउटा पनि मेमोरी कार्ड.
प्राविधिक विशिष्टता तालिका
मोडेल होम स्पिकर L लाउन्ज
ध्वनि स्टेरियो २.१
बास स्पिकर १ २० डब्ल्यू - inches इन्च
मध्य स्पिकरहरू १ २० डब्ल्यू - inches इन्च
ट्वीटरहरू २ को W W - १ ईन्च
ब्लुटुथ 4.1.१ कक्षा २
लक फ्रिक्वेन्सी 2.4 गीगा
डिजिटल इनपुट optical / coaxial
एनालग इनपुट Mm. mm मिमी ज्याक
USB १२ memories GB सम्मका सम्झनाहरूको लागि
आयामहरू 40 एक्स 24 एक्स 17
वजन 3.9 किलो
मूल्य 99.90 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्ज
सधैँ जस्तो, हामी तपाईंलाई ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर L लाउन्ज, र सुधार गर्न सकिने विवरणहरूको बारेमा सब भन्दा मन पराउने कुरा बताउँछौं। त्यसबाट सुरू गर्दै हामी बरु घरेलु उपकरणको सामना गरिरहेका छौं, घरमा कतै "फिक्स्ड" राख्नको लागि बढी फिट हुन्छ। तपाईं यसलाई जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ, वा तपाईंको घरमा कहिँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ, तर सधैं सकेटको छेउमा।
संग एक उपकरण छ 60W शक्ति घरमा सबै कुनामा संगीतको पर्यायवाची छ।
La ध्वनि गुण यो वास्तवमै राम्रो छ, यसले देखाउँदछ कि हामी एक त्यस्तो उपकरणको सामना गरिरहेका छौं जुन वास्तविक गुणस्तरको साथ वास्तवमा स्पष्ट र परिभाषित ध्वनि प्रदान गर्दछ।
La एफएम रेडियो उपकरणमा यो सँधै प्लस हुन्छ, ठुलो, फिक्स्डमा जुन अझ बढी देखीन्छ।
La जडान विकल्पहरूको संख्या यसले प्रस्तावहरूको सम्पुर्ण दायरा खुल्छ ता कि हामी हाम्रो सबै संगीत पुन: उत्पादन गर्न सक्छौं, जहाँ बाट पनि आउँछ।
वक्ता हुनुहोस् कि कुनै ब्याट्री छैन सम्भावनाहरूलाई धेरै सीमित गर्दछ, विशेष गरी घर बाहिर।
Su आकार यसलाई थोरै "पोर्टेबल" उपकरण बनाउँदछ, यो घरको सामानको बढी हुन्छ।
संग पेसो उस्तै कुरा हुन्छ, हामी पिग्गीब्याक बोक्नको लागि उपकरणको सामना गरिरहेका छैनौं, यो अधिक वा कम स्थिर तरिकामा पत्ता लगाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो, यद्यपि हामी यसको स्थान परिवर्तन गर्न सक्दछौं।
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर L लाउन्ज
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर 8 लाउन्ज समीक्षा गर्नुहोस्